Zihlehliswe ngamasonto amabili izinhlelo zezokusubatha ngenxa yokubheduka isibili kweCovid-19 - Impempe
Zihlehliswe ngamasonto amabili izinhlelo zezokusubatha ngenxa yokubheduka isibili kweCovid-19
Inhlangano eyengamele ezokusubatha KwaZulu-Natal seyilandele izeluleko ze-Athletics South Africa (ASA), yamisa yonke inhlobo yemiqhudelwano, imihlangano nemicimbi yezokusubatha okufaka nobekubhekwe ibe ngempelasonto.
Esitatimendeni esikhiphele abezindaba nezinhlangano ezingaphansi kwayo, i-Athletics KwaZulu-Natal, ithe yonke into iyamiswa noma iyahlehliswa kuze kube ngcono isimo sokubhebhetheka kweCovid-19.
“Sicela nazi ukuthi njengokuyalela kwe-Athletics SA (kwangoJanuwari 18, 2021) yonke imiqhudelwano nemihlangano yezokusubatha kuyahlehla kusuka manje kuze kube yiSonto lomhla ka-7 Febhuwari 20201. Lesi saziso sithinta yonke imijaho yasemgwaqeni, eyokuhamba, imidlalo yasenkundleni neyokugijima ezinkalweni,” sisho kanje lesi sitatimende.
Sibe sesiveza yonke imiyalelo ye-ASA lapho ichaza khona ngezizathu zokumiswa kwayo yonke imijaho nemihlangano.
“Cishe kumanje abanye bethu sebeyazi ngokubheda kwesimo okudalwe wukuqubuka okwesibili kweCovid-19. Besinethemba lokuthi kuyoshaya lesi sikhathi sesiqhubeka nekhalenda lethu lemicimbi yezokusubatha kodwa ngebhadi kumele sibhekane nokukhula kwezibalo ezinyuka nsuku zonke zabatheleleka ngaleli gciwane.
“Ukuzama ukuvimba leli qubula, uhulumeni usebuyisele izwe ngaphansi kwesigaba sesithathu (level 3) sokuvalwa kwezwe njengendlela ephuthumayo yokubhekana nalesi simo. Ngebhadi nathi ngeke sikwazi ukuziba isimo esinzima esibhekene naso sokukhula kwezibalo zabathelelekayo nabafayo. Into ekhathaza kakhulu wukuthi lesi sibhedukane sesibili sibonakala sikhahlameza kakhulu abantu abasebancane.
“Yingakho ke emizamweni yokunqanda lesi simo i-ASA imise yonke imicimbi nemihlangano yezokusubatha amasonto amabili. Lesi sinqumo sithikameza ne-ASA Cross Country Trials ebihlelelwe ukuba sePotchefstroom kule mpelasonto kaJanuwari 23, asehlehliselwe usuku olungaziwa okwamanje. Usuku olusha lusazodingidwa bese lumenyezelwa,” kuchaza i-ASA.
Ithe isazohlala phansi ngemuva kukaFebhuwari 7, ibone ukuthi isimo sesinjani bese kuthi ngokulandela izinqumo zikahulumeni ngendaba yeCovid-19, ithathe izinqumo ezifanele. Igcizelele ukuthi ukuziqeqesha kuvumelekile ngaphansi kwemigomo eqikelela ukuvikeleka kuleli gciwane elingumbulalazwe.
Previous Previous post: Obecija amaBhokobhoko udalula eyempi yomndeni wakhe neCoronavirus
Next Next post: Iphinde yasayina abanamava iChiefs njengoba ifuna ukuzinza kuGladAfrica Championship